Ndị Gọvanọ Ndịda Ọwụwa Anyanwụ na Ndịda Ndịda Anyanwụ Akpọkuo Gọọmenti Etiti Ka O Cheta Mpaghara Ahụ
Otu ahụ jikọtara ndị gọvanọ mpaghara ndịda-ọwụwa anyanwụ na ndịda-ndịda anyanwụ ala Naịjiria akpọkuola gọọmenti etiti ka ọ tụgharịa uche banyere ndị mpaghara ahụ, cheta ha, ma gbatara ha ọsọ enyemaka.
Ndị gọvanọ a kpọrọ oku a ma mee ka a mara nke ahụ n'okwu ha gwara ndị nta akụkọ ka ha mechara nnukwu ọgbakọ ha, bụ nke weere ọnọdụ n'Ụyọ, bụ isi obodo steeti Akwa Ịbọm, n'isi mbido izu a.
N'okwu ya na nzukọ ahụ, onyeisi oche otu ahụ, ma bụrụkwa gọvanọ steeti Akwa Ịbọm, bụ Dọkịnta Emmanuel Udom, toro ndị gọvanọ mpaghara abụọ ahụ maka njikọ aka ha, iji wee buso nsogbu na-eche ndị mpaghara ahụ aka mgba agha, tinyere ịgba mbọ ha na steeti ha dị iche iche, iji weta mmepe tọrọ àtọ na mpaghara ahụ.
Ọ kwara arịrị banyere nleghara anya nke gọọmenti etiti leghaara ndị mpaghara ahụ tinyere ụkọ nke ihe ụfọdụ e ji akwalite ọnọdụ obibi ndụ ụmụ mmadụ, bụ nke gọọmenti etiti kwesiri ịrụnyesi na mpaghara ndị ahụ.
Ndị gọvanọ ahụ kpọpụtasịrị ụfọdụ ihe dị iche iche ọchịchị etiti kwesiri ilebara anya, kwalite maọbụ dozigharịa na mpaghara ahụ, nke gụnyere: imirikiti ụzọ gọọmenti etiti dị na mpaghara ahụ, ọdụ ụgbọelu mba ofesi dị na Pọọtụhakọọtụ, Ọdụ ụgbọelu Margret Ekpo dị na Kalaba, nke Akanụ Ịbịam dị n'Enugu, nke Sam Mbakwe dị n'Owere, tinyere ọtụtụ ige ndị ọzọ ha gbakụtagoro azụ.
Ha nọzịrị na mmemme ahụ kpọkuo ya bụ gọọmenti ka ọ kwalitekwuo ọnụ ego ndị mpaghara ahụ na-eketa site n'akpa ego etiti, ma kpọkuokwa ya ka o nyefee ụfọdụ ụzọ ya dịgasị na mpaghara ahụ n'aka steeti, bụkwa nke ha kwuru na ọ ga-enye aka ịkwalite ọnọdụ mmepe izugbe na ọnọdụ obibi ndụ ụmụ mmadụ na mpaghara ahụ. Ha kwuru na o kwesiri ka mgbago ahụ ọnụ ego mmanụ gbagoro gosipụta ma pụtakwa ihè n'ọnụ ego ahụ ndị steeti na-enweta site n'akpa ego gọọmenti etiti.
Ihe ndị ọzọ a tụnyere ọnụ na ya n'ọgbakọ ahụ gụnyere: ọnọdụ nchekwa, ịkpọ ganị ganị dị iche iche na-ewere ọnọdụ na mpaghara ahụ, na oku ahụ a na-akpọ ka a hazigharịa ala Nịjiria.
Na mmechi nzukọ ahụ, bụkwa nke ikpeazụ ndị otu ga-enwe n'ahọ a, gọvanọ Udom kelekwara ndị otu a ọzọ maka mmekọrịta ha, ma kwuo ka nke ahụ digide, ọbụnadị dịka ọ matara na buusu sị na mmekọrịta ahụ bụ ụtọ nwanne.
O jiri aha ndị otu a wee too gọvanọ Obianọ na osote ya bụ Nkem Okeke maka nturu ugo ha na nhọpụta ọkwa gọvanọ ahụ e mere na steeti Anambra, ma kwuo n'ezie na ọchịchị onye kwuo uche ya ji nwayọ nwayọ ewere ọnọdụ tọrọ atọ n'ala anyị.
Ndị gọvanọ ndị ọzọ sonyere na ya bụ ọgbakọ gụnyere: gọvanọ steeti Enugu bụ Ifeanyị Ugwuanyị, nke Bayeesa bụ gọvanọ Seriake Dickson, nke Rivaasị bụ gọvanọ Nyesom Wike, nke Abịa bụ gọvanọ Okezie Ikpeazụ, nke Imo bụ Rochaasị Okorọcha, nke Deeta bụ Ifeanyị Okowa, gọvanọ Obianọ nke Anambra, nke onye nọchitere anya ya bụ osote ya, Nkem Okeke, tinyere gọvanọ Benedikt Ayade nke Krọọsụ Riva, nke osote ya bụ Ivra Esu nọchitere anya ya.